तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ! काठमाडौंमै जम्मा १५ हजार आनामै जग्गा ? - Hamro Abhiyan
तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ! काठमाडौंमै जम्मा १५ हजार आनामै जग्गा ?
काठमाडौ। यही काठमाडौं खाल्डोभित्र १५ हजार रुपैयाँ प्रतिआनामा जग्गा मूल्यांकन गरिएको छ भन्दा तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । यो सरकारी मूल्यांकन हो । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ शुरु भएसँगै सरकारले सार्वजनिक गरेको जग्गाको मूल्यांकनमा काठमाडौंमा न्यूनतम १५ हजारसम्म दर तोकिएको छ ।
उक्त समितिले काठमाडौंभित्र सबैभन्दा सस्तो १५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ । समितिले रिङ्गरोड चक्रपथसँग जोडिएको दायाँबाँयाको बल्खुदेखि वनस्थलीसम्मको प्रतिआना न्यूनतम ३५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ । काठमाडौं महानगरभित्रै विष्णुमति खोला पुलदेखि रविभवन वडा नम्बर १४ को सीमासम्म गणेशमान पथ र कालिमाटी चोकदेखि दक्षिणतर्फ बल्खु क्षेत्र प्रतिआना ३३ लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यांकन गरेको छ।
यसैगरी महानगरका १३ नम्बर क्षेत्रमा पक्की सडक भएको १८ लाख रुपैयाँ, कच्ची मोटरबाटो भएको १५ लाख रुपैयाँ, गोरेटो बाटो भएको १० लाख रुपैयाँ र बाटो नभएको ६ लाख रुपैयाँ प्रतिआना मूल्यांकन गरिएको छ । महानगरको वडा नम्बर १४ मा ३३ लाख रुपैयाँदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म, वडा नम्बर १५ मा प्रतिआना २० लाख रुपैयाँदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ ।
यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिकामा ११ लाख रुपैयाँदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । सीईओ आचार्यकै समितिले मालपोत कार्यालय साँखु मातहतको क्षेत्रहरुको जग्गा पनि मूल्यांकन गरेको छ । साँखु मालपोत क्षेत्रमा प्रतिआना १५ हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ ।